cerita rakyat Qnc Jelly Gamat Di Apotik 0 Comments
Legenda alas roban dalam bahasa igbo - Roban Alass dị na mpaghara nke teak ọhịa na Plelen, Grising, Batang, Central Java. Roads wuru na oge nke Mystery Alass Robanpemerintahan Governor General Herman Willem Daendels, a Governor General nke Dutch East Indies na 36 onye chịrị n’etiti 1808-1811. Legenda alas roban dalam bahasa igbo
Roban na-ewepụtara okwu ‘na-ezu’ nke pụtara na mmiri adahade, okwu nke ọma mara site na ala gbara osimiri okirikiri obodo. Roban nke obodo nta dị na district Subah. Roban na ala gbara osimiri okirikiri ebe na Java Oké Osimiri. The ambiance nke a ruo mgbe ugbu a ka na-ekpuchiworị a oké ikuku nke Mystique. Township Roban Roban mabu dị ka Mmụọ Ọjọọ. E kwuru na oge na-agafe, ndị mmadụ Roban ọtụtụ nke nwere nnukwu ihe ọmụma na-enwe ike ịgbanwe onwe ya dị ka a agụ iyi.
Otú ọ dị Ewoo Roban Roban na nwere ọrụ dị mkpa mgbe anya si akụkọ ihe mere eme. Batang mabu dị ka ebe na ka jụụ Ewoo Roban niile bụghị dị ka ọrụ ike dị ka ọ dị taa. Ewoo Roban mara ebe stealth, lelembut, na abiatibet (abiatibet). Ókè-ala region Kendal malite na Batang ugbu a ruo Pekalongan. Sultan Agung ezube ibibi VOC nke di na Batavia. The agha abuana ke agha wee si dị iche iche ebe na Java. Iji-enwe ike na-akwado ndị logistic ọkọnọ outposts wuru a logistic support dị iche iche ebe, nke otu n’ime na Ewoo Roban. Na-ewu a post na Ewoo Roban, Sultan Agung zitere Ki Bahurekso emeghe Ewoo Roban. Emepe Subah e weere malitere si District n’ebe ọdịda anyanwụ. Ọ na-aduak-emeghe ala ga-eji na-eto eto a dịgasị iche iche nke nri na isi mmalite na-akwado logistical mkpa. Ma ebe ahụ ga-wuru na mmiri e gbochiri egbochi e nwere nnukwu osisi cross na osimiri. Mgbe ọ tụgharịrị uche Friday ọdọ mmiri awa iji nweta reinforcements. Mgbe osisi ga-ewepụ na-ebibi, nke a na-akpọ ngembat Watang (eweli Wood) mgbe ahụ ji dị ka aha Rod. Posts na-wuru na-eme atụmatụ na-ke ebe Balekambang, Gringsing. Ebe e nwere bụ a ụlọ na e kwere ka Sultan nke Mataram. Tinyere agwọ oyiyi yiri na-gosipụtawo na Obí Hardowaliko Mataram Jogjakarta ma na-enweghị okpueze. Balekambang bụ a ụlọ iyi na iputa site n’ala. Na gburugburu e nwere nnọọ ọtụtụ apiti na ugbu a ghọọ ubi osikapa. Nwere ike hụrụ n’ụzọ doro anya na na gburugburu ubi osikapa bụ ubi na-eguzo na mbụ apiti n’ihi ala udidi.
“>Ewoo ma ọ bụ oké ọhịa na-eji dị ka ebe ozu pembunagan n’ihe dị 1808-1811 (tara nke development De Grote Postweg), n’afo 1980 (Petrus tara nke ọhụrụ iji) na elu ọnụ ọgụgụ nke ihe mberede okporo ụzọ ruo ugbu a.
A n’akụkụ mmetụta nke a na mmepe bụ mbibi nke oké ọhịa na Java, karịsịa n’ebe ugwu mpaghara. N’aka nke ọzọ, egwu ihe bụ ọnụ ọgụgụ nke ndị na-anwụ n’ihi na mmepe usoro. Na mgbakwunye na n’elu, mgbe ọhụrụ iji, roban Ewoo ebe ozugbo mee dị ka a dumping n’ala ozu nke ndị e dinara a nzuzo ọrụ n’oge ya a maara dị ka Petrus ma ọ omimi agba ụta gburugburu 1980s. Ọ bụghị naanị nke ahụ, na ebe-enwe mgbe ihe mberede okporo ụzọ na kọrọ nwere ọtụtụ nwụrụ n’ebe dị ka a n’ihi nke mberede. Site n’ihe ọmụma m ga-esi na-kọwara na ọ bụ ike nke na ọnụ ọgụgụ nke ihe mberede na mpaghara ebe a bụ ezi elu roban Alass.
A n’akụkụ mmetụta nke a na mmepe bụ mbibi nke oké ọhịa na Java, karịsịa n’ebe ugwu mpaghara. N’aka nke ọzọ, egwu ihe bụ ọnụ ọgụgụ nke ndị na-anwụ n’ihi na mmepe usoro. Na mgbakwunye na n’elu, mgbe ọhụrụ iji, roban Ewoo ebe ozugbo mee dị ka a dumping n’ala ozu nke ndị e dinara a nzuzo ọrụ n’oge ya a maara dị ka Petrus ma ọ omimi agba ụta gburugburu 1980s. Ọ bụghị naanị nke ahụ, na ebe-enwe mgbe ihe mberede okporo ụzọ na kọrọ nwere ọtụtụ nwụrụ n’ebe dị ka a n’ihi nke mberede. Otú ọ dị, m na-a obere obere ekweta ma ọ bụrụ na ọ bụla mberede na-erukwa na ebe roban Ewoo ya naanị mere site omume nke kpakpando Nigeria naanị.
“>Ewoo Roban ỌNỌDỤ
N’okporo ámá bụ otú Uphill na asọfe elu n’elu ugwu na nnukwu-sized teak ndo osisi. Hiking mara anọgidewokwa na-anyụ Mystery Ewoo Robankarena ọtụtụ ọhụrụ pụtara na ọnụ ọgụgụ nke ihe mberede. Na ogologo uzo (center) e nwere a nchekwa ncheta. Central Line (ochie) Ewoo Roban e wuru site Dutch, adịghị anya site ochie track bụ Goa Japan. Goa Japan e wuru gburugburu 1942 site na Japanese. Rod hụrụ 2 Goa na Japan, ya bụ na Ewoo Roban Roban na Turkish. Goa Japan na Ewoo Roban e nwere mkpokọta 13 wuru ọgba ọnụ mgbe romusha na 1 eke abaitiat. 1 n’ọgba, a omimi nke 30 mita, na 12 ndị ọzọ n’etiti 5-20 mita odude nso obere iyi agbakọta. Maka keakamere ọgba na e weere omimi nke 30 mita ike ịba 8 tank mgbe tank size. Goa osimiri Roban e wuru gburugburu 1942 na-eji ruo 1948 site na Japanese. Goa emi odude na nso n’akụkụ osimiri Roban Ngodek oge zuru ezu obosara na ịdị omimi nke 20 mita. Dị ka ndị àmà na ntọala nke mbụ Japanese ọdụ ụgbọ mmiri mgbe na-alụ ọgụ Indonesia na Netherlands. The ọgba a na-eji dị ka a hideout site Japanese.
“>Omimi Ewoo Roban
Ọ bụ ezie na ma ama dị ka teak ọhịa ’spooky’ na Central Java, ebe a nwere ya akụkọ. Karịsịa na ” gara aga ‘, mgbe ọhụrụ ụzọ na-wuru Ewoo Roban Indonesian ọchịchị adịghị adị. Otu àgwà na nne na nna m na-eme mgbe anyị na–putra-nwa na-eto eto na-eme njem site na ụgbọala si East Java ka Central Java n’oge ezumike ụlọ akwụkwọ ụmụaka. Otu nke anyị mmasị ụzọ dị ka ụmụ n’okpuru afọ iri na ise bụ Ewoo Roban, zuru ezu na ihe niile akụkọ ’spooky’ nwere. Gụnyere ‘wingitnya’ ma ọ bụ ihe egwu nke oké ọhịa ya na visual nkọwa. Tupu ha abanye oké ọhịa na mgbe nke oké ọhịa, ya na e nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na nri ụlọ. Tinyere nwa ewu satay Subah Valin ebe mara mma a ma ama. Ma ozugbo n’ọhịa dị ka 1 km, dịghị uloanumaanu ihe ọ bụla pụrụ ga-eji dị a ‘ngiras’ ma ọ bụ nri nri.
Ọ bụ ezie na ma ama dị ka teak ọhịa ’spooky’ na Central Java, ebe a nwere ya akụkọ. Karịsịa na ” gara aga ‘, mgbe ọhụrụ ụzọ na-wuru Alass Roban Indonesian ọchịchị adịghị adị. Otu àgwà na nne na nna m na-eme mgbe anyị na–putra-nwa na-eto eto na-eme njem site na ụgbọala si East Java ka Central Java n’oge ezumike ụlọ akwụkwọ ụmụaka. Otu nke anyị mmasị ụzọ dị ka ụmụ n’okpuru afọ iri na ise bụ Alass Roban, zuru ezu na ihe niile akụkọ ’spooky’ nwere. Gụnyere ‘wingitnya’ ma ọ bụ ihe egwu nke oké ọhịa ya na visual nkọwa. Tupu ha abanye oké ọhịa na mgbe nke oké ọhịa, ya na e nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na nri ụlọ. Tinyere nwa ewu satay Subah Valin ebe mara mma a ma ama. Ma ozugbo n’ọhịa dị ka 1 km, dịghị uloanumaanu ihe ọ bụla pụrụ ga-eji dị a ‘ngiras’ ma ọ bụ nri nri.